Amnesty oo sharci daro ku tilmaamtay xukunkii Boqor Buur-madow
Hayadda Amnesty International ee u dooda xaquuqda aadanaha ayaa waxa ay ka codsatay Maamulka Somaliland inuu dib uga laabto xukunkii ay ku riday Boqor Buur-madow.
War Saxaafadeed ay soo saartay Hayadda Xuquuqda Aadanaha Amnesty International ayaa Hayadu waxa ay ka codsatay Maamulka SoomaaliLand inuu dib uga laabto Xukun Hal Sano ah oo Maxkamada SoomaaliLand ay dul dhigtay Boqor Cismaan Aw Maxud Buurmadow oo mudo ku xiran Magaalada Hargesia. Hayadu waxa ay sheegtay in horay Maamulka Somaaliland ay ugu gudbisay Codsi ku saabsan siideynta Boqorka balse SoomaaliLand ay ka dhaga adeegtay baaqa ay u jeediyeen.
Sidoo kale Warka kasoo baxay Amnesty International ayaa lagu sheegay in Xukunka Boqorkaasi uu ka baxsan yahay Shuruucda Caalamiga ah islamarkaan waxaa loogu baaqay Maamulka Soomaaliland inay ilaaliyaan Xuriyada hadalka maadaama ay ku dhaqmayaan Dimuqraadiyada.
9-kii Bishaan July ayaa Magaalada Hargeysa Xukun 1 sano ah lagula riday Boqor Cusmaan Maxamuud kaasi oo Xabsigiisa ku qaadanaya Xabsiga Mandheera oo 70-Km u jira Hargeysa waxaana lagu eedeeyay inuu doonayay in uu wadahadalo ka dhax bilaabo Dowladda Soomaalia iyo Maamulk Soomaali Land.